စိန့်မာတင်ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းမှ / SPF ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ | Maarten
စိန့်မာတင်ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းမှ / SPF
လည်းစိန့် Maarten အဖြစ်လူသိများတစ်ဦးကစိန့်မာတင်ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်း (SPF), သာမန်အားဖြင့်သာကိုး စား. တှငျတှေ့ features တွေပါတဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သီးခြားဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်ပါတယ်။ ဒတျချြအမည် "SPF" ၏အတိုကောက်နှင့်အတူ "Stichting Particulier ဝါသနာ" ပါ။ အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှုများကို သာ. ကြီးမြတ်တဲ့အရာတစ်ခုကာကွယ်မှုများအတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နာမတော်၌ဖြစ်ကြ၏။
နိုင်ငံခြားသားများဖန်တီးအပြည့်အဝမယ့် SPF တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်များသို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များအဘယ်သူမျှမနှင့်အတူတစ် SPF ပင်အကျိုးခံစားခွင့်များပါဝင်သည်မှမရှိပါ။
အများဆုံးပုဂ္ဂလိကအမြစ်လည်းမတူဘဲ, အ SPF လူမှုရေးသို့မဟုတ်ကုသိုလ်ဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်မလိုဘဲဆွဲသွင်းပါဝင်များနှင့်အခြားသူများအားဖြန့်ဝေပါစေနိုင်ပါတယ်။ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ, အမည်ရှိလျှင်, ယေဘုယျသို့မဟုတ်ကန့်သတ်အခွင့်အရေးများရှိနိုင်ပါသည်။
စိန့် Maarten ဗင်နီဇွဲလားအနီးကာရစ်ဘီယံပင်လယ်အတွင်းတည်ရှိပြီးဟောင်းတစ်ဦးဒတျချြကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့သည်။ လောလောဆယ်ကျွန်းနယ်သာလန်ဒမ်း၏အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ပြည်နယ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကစိန့် Maarten ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်း (SPF) ဤအကြိုးကြေးဇူးမြား၏အားသာချက်ယူနိုင်သည်
• စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားရေးပါဝင်လာ: SPF ကိုနိုင်ငံခြားတည်ထောင်သူကဖွဲ့စည်းနှင့်နိုင်ငံခြားအကျိုးခံစားခွင့်ရှိစေနိုင်သည်။
• အဘယ်သူမျှမအခွန်: တက်ကြွစွာအမြတ်အစွန်းများအတွက်လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုများတွင်စေ့စပ်မဟုတ်လျှင်အဆိုပါ SPF လုံးဝအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအခွန်မှဘာသာရပ်အမေရိကန်နေထိုင်သူများနှင့်လူတိုင်းမိမိတို့၏အစိုးရများအားလုံးကိုဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအဖြစ်ခန့်အပ်နေတယ်ဆိုရင်, ၎င်းတို့၏အမည်များကိုမဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ပေါ်လာဘူး။
• အစာရှောင်ခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်း: SPF ရဲ့တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေ့ရက်ကာလ၌ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ထားနိုင်ပါတယ်။
• အင်္ဂလိပ်: တရားဝင်ဘာသာစကားတစ်ခုမှာအင်္ဂလိပ်ဖြစ်ပါသည်
စိန့် Maarten ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်း (SPF) အမည်
စိန့် Maarten အခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူတတိယပါတီများရောထွေးဖို့မသကဲ့သို့တိုင်းပုဂ္ဂလိကအခြေခံအုတ်မြစ်ထူးခြားတဲ့အမည်အားရွေးချယ်ရမည်။
တိုင်း SPF ၎င်း၏အမည်ကို၏အဆုံးသို့မဟုတ်ဒတျချြအတိုကောက် "SPF" မှာစကားလုံး "ဖောင်ဒေးရှင်းက" ပါဝင်ရမည်။
အခြားနိုင်ငံများတွင်အများစုကပုဂ္ဂလိကအခြေခံအုတ်မြစ်ဥပဒေများတက်ကြွစွာအမြတ်အစွန်းတစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပို့ချရာမှသူတို့၏အမြစ်ကိုတားမြစ်ထားသည်။ သို့သော်စိန့် Maarten မြို့ပြ Code ကို၏စာအုပ်2တက်ကြွစွာ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့် SPF အားပေး။ ဒါကကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီအဖြစ်သရုပ်ဆောင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကန့်သတ်မိတ်ဖက်တစ်ဦးမိတ်ဖက်အဖြစ်ပါဝင်ပါဝင်သည်။ ဤအလှုပ်ရှားမှုများမျှမြို့ပြ Code ကို၏စာအုပ်2အဆိုအရ "စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပို့ချ" အဖြစ်မှတ်ယူကြပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဤအမျိုးအစားများကိုရန်မန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်။
တစ်ဦးက SPF ဒေသခံတစ်ဦးတရားမဥပဒေသက်သေခံရှေ့နေများ၏ရှေ့မှောက်၌ရေးသားထားသောဥပဒေရေးရာစာရွက်စာတမ်း (Foundation ကိုကငျြ့) ၏ကွပ်မျက်ခြင်းဖြင့် (ထည့်သွင်း) ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဒါဟာအခြေခံအုတ်မြစ်၏ရည်ရွယ်ချက်, ရည်မှန်းချက်တွေ, ကနဦးပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်စစ်ဆင်ရေးအသေးစိတ်အဖြစ်လုပ်ရပ်ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်တစ်ကော်ပိုရိတ်ဆောင်းပါးများကိုဆင်တူသည်။
•အသုံးအနှုန်းသို့မဟုတ်အတိုကောက် "SPF" သို့မဟုတ်၎င်း၏အမည်ကိုအဆုံးတွင် "ဖောင်ဒေးရှင်းက" ဖြစ်စေအပါအဝင်အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့အမည်ကား,
•အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ, ကာကွယ်, နှင့်ဘက်တော်သားခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း။
အဆိုပါ notarized ဖောင်ဒေးရှင်းမှအကျင့်ကို Foundations ၏စိန့် Maarten ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးမှတ်ပုံတင်မည်နှင့်အတူတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ တင်သွင်းပြီးတာနဲ့, အ SPF ခိုင်လုံသောဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်လာသည်။
အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုဖန်ဆင်းသူက "ကိုတည်ထောင်သူ" အဖြစ်လူသိများသည်။ ပညတ္တိကျမ်းတစ် SPF ထူထောင်တဲ့အခါမှာတစ်ဦးကိုတည်ထောင်သူကြီးမြတ်လတ္တီအပိုင်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဤသည်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ရပ်များဟာဝင်ငွေဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုအောင်နှင့်စပ်လျဉ်းဘယ်လိုလုပ်ရပ်အတွက် dictate နိုင်စွမ်းပါဝင်သည်။ သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကရိုးအမြစ်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်, အခါ, နှင့်ဖြန့်ဝေအမျိုးအစားများကန့်သတ်သည်အခြားနိုင်ငံများ၏ဥပဒေများနှင့်မတူဘဲ, အ SPF ထိုကဲ့သို့သောကန့်သတ်နိုင်ဖို့ဘာသာရပ်မဟုတ်ပါဘူး။
တိုင်း SPF ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဝင်ငွေ၏ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်စီမံခနျ့ခှဲသူ (သို့မဟုတ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုယ်စားလှယ်) ကိုခနျ့အပျရမယျ။
(မည်သည့်အမည်ရှိနေကြသည်လျှင်) တည်ထောင်သူနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်အတွက် SPF ရဲ့အမြတ်အစွန်းအပေါ်ကော်ပိုရိတ်များနှင့်ဝင်ငွေအခွန်ပေးဆောင်ခြင်းမှရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် Non-နေထိုင်သူများဖြစ်ရပါမည်။
တစ်ဦး SPF မှမြို့တော်လွှဲပြောင်းတဲ့အခါမှာနေထိုင်သူများ 25% ၏လက်ဆောင်အခွန်နှုန်းဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ non-နေထိုင်သူများကဒီဆုကြေးဇူးကိုအခှနျကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။
Non-နေထိုင်သူအကျိုးခံစားခွင့်မှ periodic ငွေပေးချေမှုအတွက်လက်ခံသူမှ taxable မရှိကြပေ။
SPF ရဲ့အမြတ်အခွန် (ကော်ပိုရိတ်များနှင့်ဝင်ငွေအခွန်) ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။ ဤသည်မှာကင်းလွတ်ခွင့်တဦးတည်းအခွအေနေပျေါမှာကျိန်းဝပ်: အ SPF စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အမြတ်အစွန်းတစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်မထားဘူး။ သို့သော်တရားကိုကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများနှင့်သရုပ်ဆောင်လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်တစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မှီမကဖော်ပြသည်။
အခွန်အကြွေးဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်လျှင်အခွန်ပြန်တဲ့ SPF ကနေမလိုအပ်ပါ။ အဆိုပါအခွန်စစ်ဆေးရေးအတွက် SPF စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ခြင်းတစ်ဦးသံသယရှိတည်ရှိပါလျှင်နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
SPF ကိုတစ်ဦးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်နေလျှင်, ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကို 34.5% ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်: ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအခွန်မှဘာသာရပ်လူတိုင်းလုပ်ပေးအဖြစ်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းသူတို့ရဲ့အခွန်အာဏာပိုင်များ, အားလုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေထုတ်ဖော်ရပေမည်။
စိန့် Maarten ကိစ္စတွင်တရားကိုလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကပါဝငျသောအရာကိုရှငျး:
•ပုံမှန်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပါ။ အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမရှိခြင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းမရှိခြင်းဖော်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင်လည်းကိုင်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်အဖြစ်မှတ်မည်မဟုတ်ပါ။
•စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးဘဝ၌ပါဝင်မှုမရှိခြင်း, အမြတ်အတွက်လှုပ်ရှားမှုရလဒ်များကို, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမည်မဟုတ်ပေလျှင်ပင်။ ဒါကြောင့်အမြတ်အစွန်းအမြတ်အခွန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။
အောက်ပါ "လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ" စဉ်းစားမရလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလှုပ်ရှားမှုများနေသောခေါင်းစဉ်:
•ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီ - တစ် SPF ပုံမှန် passive ကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီအဖြစ်ဆောင်ရွက်စေနိုင်သည်။ အဆိုပါ SPF များကကျင်းပမယ့်ကုမ္ပဏီအတွက်ရှယ်ယာများ၏ရာခိုင်နှုန်းကတက်ကြွစွာသို့မဟုတ် passive ဟုတ်မဟုတ်ကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်။ ကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်မှုအခန်းကဏ္ဍတက်ကြွသို့မဟုတ် passive ရှိမရှိဆုံးဖြတ်သည်။
•ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလှုပ်ရှားမှုများ - SPF ရဲ့ကဲ့သို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအမျိုးမျိုးပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်နိုင်သည်ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်, ကုန်စည်, သိုက်, ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများ, လုံခြုံရေးနှင့်စတော့ရှယ်ယာ။ နေသမျှကာလပတ်လုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါဝင်သော passive နှင့်မဖြစ်သကဲ့သို့။
•တွေမှာ Passive ဘဏ္ဍာရေးလှုပ်ရှားမှုများ - တစ် SPF ပါတီများဆက်စပ်သို့မဟုတ်တတိယဖို့ပိုက်ဆံချေးငှားမှုနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ SPF ရန်ပုံငွေများချေးနှင့်အခြားသူများသူတို့ကိုချေးငှားမှုဖြစ်နိုင်သည်။ အကျိုးစီးပွားတရားစွဲဆိုနိုင်ပါတယ်။
•နှစ်စဉ်ကြေးများ, အာမခံနှင့်, ပင်စင် - SPF ရဲ့အနာဂတ်နှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ကြေး, အာမခံသို့မဟုတ်ပင်စင်တာဝန်ဝတ္တရားကိုဖုံးလွှမ်းရန်ရန်ပုံငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့သောမူဝါဒများ SPF ကိုမှလှူဒါန်းခဲ့နိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားလှုပ်ရှားမှုများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖန်တီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲတစ်မိသားစုတူသောသူတဦးအုပ်စုကန့်သတ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်သက်ဆိုင်တဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ၏ကြီးမားသောအုပ်စုတစ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမြားတှငျပါဝငျခွငျးအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။
• Real Estate - SPF ရဲ့အိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်တက်ကြွစွာအိမ်ခြံမြေဝယ်ယူရောင်းချခြင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ ပိုင်ဆိုင်သောအိမ်ခြံမြေအတွက်ဥယျာဉ်စောင့်ကနေငှားစုဆောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်ပါဘူး။
အဆိုပါ SPF တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်အတွင်း၌ရေးထားလျက်ရှိ၏နှင့်မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးကစိန့် Maarten ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်း (SPF) ဤအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိသွား: ပြီးပြည့်စုံသောနိုင်ငံခြားပါဝင်မှု, privacy ကို, အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်မြန်ဆန်ဖွဲ့စည်းခြင်း, နှင့်အင်္ဂလိပ်ယင်း၏အရာရှိတဦးကဘာသာစကားများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။